Aabe wiilkiisa maxkamad ula tiigsanaya arrin uu wakhti dheer u bareeri waayay - BBC News Somali
Image caption Meelo badan ayey ka dhacdaa in waalidiinti ay daryeel ka waayaan carruurtooda
Abu Taher wuxuu sheegay in wiilkiisu uu mar walba ahaa "Cunug fiican".
Muddo sannado ah, Mr Taher wuxuu ku ganacsan jiray dukaan yar oo dharka lagu iibiyo, kaasoo uu ku lahaa magaalada Chittagong ee waddanka Bangladesh.
Wuxuu howlgab noqday isagoo lacag yar heysta, ka dibna wuxuu noqday qof dhaqaale ahaan ugu tiirsan wiilkiisa iyo gabadhiisa.
"Aniga iyo xaaskeyga dhibaato badan ayaan u soo marnay korinta wiilkeenna, laakiin markii uu guursaday ka dib, wuu isbaddalay wuuna joojiyay caawinaaddii iyo xannaanadii aan ku heysanay", ayuu yiri Mr Taher.
Isagoo xitaa ay caawineysay gabadhiisa, Mr Taher xaaladdu aad bay ugu adkeyd.
Odaygan oo 75 sano jir ah wuxuu sheegay in waddo kale aysan u furneyn, sidaas awgeena uu go'aansaday inuu wiilkiisa sharciga la tiigsado.
Wuxuu dacwad maxkamadeed kusoo oogay wiilkiisa oo lagu magacaabo Mohammad Shahjahan, isagoo ku eedeynaya inuu joojiyay caawinta waalidkiisa.
"Wuxuu ahaa go'aan igu adag, muddo dheer ayuu qof walba igu boorrinayay inaan dacwad kusoo oogo wiilkeyga, laakiin anigu sidaas ma aanan rabin. Balse kiiskii waan geeyay maxkamadda, markii aan waayay jid kale oo ii furan", ayuu yiri Taher.
Wiilkiisu wuu beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay. Labada waalid wakhti dheer ayey nolosha ku adkeyd, laakiin wiilkooda, oo bangi ka shaqeeya wuxuu ku dooday inuu wax walba ku caawin jiray. Wuxuu sheegay in aabihiis uu kiiskan u diiwaan galiyay, si uu "Xushmadda uga qaado isaga".
Dagaalka u dhaxeeya waalidka iyo carruurta
Isku dhaca waalidka iyo carruurtooda waa mid ka jira meel walba, laakiin waxa uu Mr Taher wiilkiisa ku heysto ma aha mid laga wada sameeyo guud ahaan caalamka.
Image caption Mr Taher wuxuu sheegay in aysan waddo kale u furneyn
Kiiska ka dhanka ah wiilkiisa wuxuu la cuskaday sharciga dalka Bangladesh ee dhigaya xannaaneynta waalidiinta waayeelka ah.
Xeerkaas ayaa dhigaya in waalidka lagu taageero dhinaca dhaqaalaha, wuxuuna ciqaab u asteeyay carruurta ku guul darreysata iney waalidkooda daryeelaan.
Waddamo badan oo sharciyada noocan ah ay ka jiraan, sida Mareykanka, si buuxda loogama hirgaliyo.
Waajibaadka ku saabsan daryeelka waalidiinta
Waddanka Singapore ayaa ka mid ah tusaaleyaasha ugu fiican.
Waalidiinta waayeelka ah ee aan dhaqaalaha kasban karin waxay xaq u leeyihiin iney taageero ka helaan carruurtooda, sida uu qabo sharci ka jira dalkaas.
Waxay dacwado kusoo oogi karaan ilmaha aan waalidkooda daryeelin, iyagoo awood dhaqaale haya.
Garsoorka maxkamadda ayaa markaas ka dib ku xukumi kara carruurta iney waalidkooda u qoondeeyaan dhaqaale cayiman oo bil kasta laga rabo.